အလက်ဇန်းဒါး Naydenov - 30 များအတွက် Forbes မဂ္ဂဇင်း 30 လက်အောက်တွင် 2017 များထဲမှ - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
Forbes မဂ္ဂဇင်း 30 လက်အောက်တွင် 30 2017
Forbes ၏ 30 လက်အောက်တွင် 30 ဥရောပ 2017 တစ်ခုမှာ: လူမှုလုပ်ငန်းရှင်များ
သူကဘာလင်, ဂျာမနီနှင့်ဆိုဖီယာ, ဘူလ်ဂေးရီးယားကနေ "vremigrant" (ယာယီတိုငျးတပါးသို့ပွောငျးရှေ့နထေိုငျသူ) ကဲ့သို့မိမိကိုမိမိသတ်မှတ်ပါတယ်။
အဘိဓာန်ထဲမှာ "vremigrant" ကဲ့သို့သောစကားလုံးများ၏အဘယ်သူမျှမချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသည်။ သင်ကရှင်းပြကူညီနိုင်မလား?
အဆိုပါစကားလုံးတစ်ဘာလင်မီးဖိုချောင်ထဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းငါ့ဆီသို့ရောက် လာ. ။ ငါ့အဘို့ကကျြမှောကျခတျေသို့ထွက်ခွာသွားကြများအတွက်မှန်ကန်သောနာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ "အချိန်-ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား" အလွန်အမင်းမိုဘိုင်းနှင့်ချက်နဲ့ယာယီရွှေ့ပြောင်းပါ၏ သူတို့ချမ်းသာနိုင်ငံများတွင်နှစ်အနည်းငယ်ဘို့လေ့လာဖို့ပြည်ပနေသောကျောင်းသားများ, အိမ်ကနေပိုကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်အတွေ့သောသူကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ, ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ, ရာသီအလိုက်လုပ်သားများဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဤလူများသည်တစ်ဦးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်နေရာသာပိုင်မထင်သော်လည်း, သူတို့ဆွေမျိုးသားချင်းများ, မိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်အကြောင်းတရားများ၏ကွန်ရက်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လူမှုမီဒီယာ, ဖုန်းများများ၏အနိမ့်စျေးနှုန်းများ, အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ပျံသန်းမှုအဖြစ်မှန်ရှိ "အချိန်-ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား" သူတို့ချစ်ရသူနှင့်အတူနီးပါးသလောက်အချိန်ဖြုန်းကြပြီးလျှင်အဖြစ်၎င်းတို့၏ဇာတိမြေတွင်အဘယ်အရာဖြစ်ပျက်အကြောင်းသင်ယူနိုင်အောင်အများကြီးကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာပြောင်းလဲပြီ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဲဒီမှာနေထိုင်နေခဲ့ကြသည်။
ဘာလင်၌ငါလူတိုင်းကိုတစ်ချိန်တည်းမှာအလွယ်တကူ fit နှင့်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ အဆိုပါမြို့, ၎င်း၏ရပ်ကွက်နှင့်၎င်း၏မြို့သားတို့, တစ်စပ်ချုပ်ပညာစောင်သကဲ့သို့ရောင်စုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအနုပညာရှင်များပကတိ smorgasbord, လုပ်ငန်းရှင်များ, သုန်မှုန်အရှေ့ဘာလင်ကောင်းစွာဝတ်ဆင်ပြုံးအငြိမ်းစားအနောက်ဘာလင်, စပိန်နှင့်ပေါ်တူဂီတို့သည်အစဉ်အမြဲပွဲလမ်းသဘင်ကျောင်းသားများ, "ဂျာမန်တူရကီ" ညံ့ဖျင်းဝတ်ဆင်ရုရှားနှင့်ရိုးစွန်းဒေသများမှနှင့်သင်တန်း၏ထောင်ပေါင်းများစွာထံမှငယ်ရွယ်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူဖြစ်ပါသည် အစိုးရအရာရှိများနှင့်သံတမန်များ၏။ ထိုလူငယ်မျိုးဆက်တစ်ဘာလင်ဖြစ်ဖို့သဘောထားကိုပိုမိုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဘာလင်မွေးဖွားခဲ့သည်သူမည်သူမဆိုမသိရပါဘူး။
ဒါဟာအစဉ်အမြဲကိုယ့်ကိုယ်ထက်သင်တို့ပတ်လည်ပိုပြီးအောင်မြင်တဲ့လူတွေ, ဒါမှမဟုတ်သင်ယူဖို့အဘယ်သူကိုမှသင်၏အသိုင်းအဝိုင်းများတွင်ပိုမိုအတွေ့အကြုံရှိလူဦးရှိသည်ဖို့နှင့်အနည်းငယ်သင့်ရဲ့အစစ်အမှန်စွမ်းရည်အထက်ကိုယ့်ကိုကိုယ် (ကအလုပ်, အောင်မြင်သောစီမံကိန်းများကို) အတွက်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုတင်ထားရန်အလွန်အရေးပါအဓိပ်ပာသည်။
သငျသညျတစ်ပြိုင်နက်အများအပြားစီမံကိန်းများအပေါ်အလုပ်လုပ်တယ်သူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း - သငျတက္ကသိုလ်ကိုသွား, သငျသညျအလုပ်မလုပ်, စီမံကိန်းများညှိနှိုင်း, သင်သည်သင်၏အားလပ်ချိန်ရှိသည်။ သင်တို့ရှိသမျှကြောင်းကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲသလဲ?
အကြှနျုပျ၏နေ့စဉ်ဘဝမဟုတ်ဘဲ hectic ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်ကျိန်းသေတစ်တင်းကြပ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မှကပ်အဖြေမဟုတ်ပါဘူး။
သငျသညျအလက်ဇန်းဒါး Naydenov အကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်သမျှကိုဒီမှာတွေ့နိုင်ပါသည်:
Facebook ပေါ်မှာအလက်ဇန်းဒါး Naydenov
ဘာလင်, လူ, သိပ္ပံပညာ, startup | | rating:5/ 30